Ahoana ny fomba ahazoana ny emoji rantsan afovoany ho an'ny WhatsApp | Vaovao IPhone
Ahoana ny fomba ahazoana ny emoji rantsan afovoany ho an'ny WhatsApp
Amin'izao fotoana izao, ary tsy fantatsika raha tsy rahoviana, Apple dia tsy mamela antsika hampiasa ny emoji afovoany afovoany tsy misy fampiharana. Tsy maintsy heverin'izy ireo fa fihetsika tsy mahalala fomba loatra ny manampy, na dia ampiasaintsika ho vazivazy amin'ny namantsika aza ny ankamaroan'ny fotoana. Ny emoji "comb" dia ny kisary izay nangatahan'ny mpampiasa indrindra indrindra, fa toa ny Spock emoji, Apple dia mbola tsy namolavola hanampy azy. Na izany na tsy izany, misy fomba iray hanatanterahana azy, na dia amin'izao fotoana izao aza amin'ny chat WhatsApp ihany no miasa.
Ny fomba hahazoana azy dia mitovy amin'ny fomba ampiasaina hahazoana ny Spock emoji, miaraka amin'ny fahasamihafana misy ny emoji rantsana afovoany ao amin'ny WhatsApp tranonkala kinova. Raha te handefa ny fifandraisana aminao ianao dia mila manaraka ireto dingana manaraka ireto fotsiny.
Handeha isika web.whatsapp.com amin'ny solosaina.
Manokatra resaka izahay.
Tsindrio ny kisary emoji, jerena ny rantsantanana afovoany dia alefanay.
Avy amin'ny iPhone dia sokafanay ny chat izay nandefasanay azy ary alainay ny emoji an'ny rantsantanana afovoany.
Mandeha amin'ny Fikirana / General / Keyboard / Fampandehanana haingana.
Mikasika ny marika plus (+) izahay.
Mametaka ny emoji izahay ary manampy fiasa haingana izay hosoratanay hananana ny emoji.
Mikasika ny famonjena isika.
Avereno ny fizotran'ny loko rehetra izay tianay hotehirizina.
Raha hampiasa azy io dia mila manoratra ilay fiasa haingana fotsiny ianao amin'ny resaka WhatsApp. Araka ny ho hitanao, rehefa manoratra azy famantarana hafahafa no hita fa, rehefa mandefa azy ianao, dia mihena ary mivoaka tonga lafatra. Ny lafy ratsy dia tsy mifanaraka amin'ny rindranasa hafa izy io, fa, eo am-piandrasana ny hampiasan'i Apple azy amin'ny tanindrazany, dia misy zavatra iray. Farafaharatsiny, avy amin'ny WhatsApp, afaka mandefa ny namantsika isika fa tsy namana loatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fomba ahazoana ny emoji rantsan afovoany ho an'ny WhatsApp
Misaotra tamin'ny fandraisana anjara, fa vitako ny dingana rehetra, ary ny zanako vavy nahazo ny roa famantarana hafahafa, hahaha, misaotra soa 😉
Naveriko daholo ny zava-drehetra ary efa mandeha tanteraka izy io, hita fa nanao zavatra tsy nety aho tamin'ny fakana tahaka ilay emoticon. Fantatro fa mandeha izy io noho ny valiny avy tamin'ny zanako vavy hahaha. Misaotra
taratasy macron dia hoy izy:
Fernando, ny tovovavinao dia mila manavao ny whatsapp amin'ny kinova farany 2.12.6, raha vantany vao manao izany izy dia ho hitany ny rantsantanana afovoany !!. Mamihina!
Mamaly an'i macroncarta
litera dia hoy izy:
Zavatra iray fotsiny, ny "rantsantanana afovoany" dia manana anarana, fo, na mieritreritra izany
Mamaly an'i Jot
Salama jot. Fantatro ny fiantsoana an'io rantsantanana io, fa tsy ny sary "rantsantanana afovoany". Manana anarana hafa tsy tokony apetraka izy 😉 Miantso ny ahy aho miaraka amin'ireo litera "atpc", saingy tsy dia tsara izany amin'ny pejy web ho an'ny daholobe.
Ataoko araka ny voalazany fa toa hitako fa tsy azo ampidirina anaty hitsin-dàlana ny emoji.
Hizaha ity amin'ny hafatra ity
manan-karena dia hoy izy:
Tena tsara !!! niasa ho ahy io tamin'ny voalohany
Valiny amin'ny manankarena
Ahoana ny fomba hanaovana vondrona misy fifandraisana amin'ny iPhone